Torohevitra 7 hananganana milina fivarotana fitomboana mahomby | Martech Zone
Torohevitra 7 hananganana milina fivarotana fitomboana mahomby
Zoma, Oktobra 21, 2016 Alakamisy Oktobra Oktobra 20, 2016 Jon Corwin
Rehefa mitady hitarika fidiram-bola vaovao amin'ny fantsona mbola tsy voadinika ireo orinasa, dia lasa malaza kokoa ny hetsika fitomboana. Fa aiza ianao no manomboka? Ahoana manomboka ve ianao? Ekeko fa mety hahagaga.
Voalohany, andao hiresaka ny antony misy ny fandraisana andraikitra fitomboana. Raha manandrana mampitombo ny vola ny orinasa iray dia afaka manao izany amin'ny fomba vitsivitsy izy ireo: manitatra ny marin'ny vokatra, manatsara ny salan'isan'ny filaharana, mampitombo ny lanjan'ireo androm-piainan'ny mpanjifa, sns. ho an'ny mpihaino marobe. Izay mitondra antsika amin'ny antony mahatonga ny orinasa sasany, toa ny Readers.com, mampiasa vola amin'ny marketing amin'ny fitomboana hahazoana mpanjifa bebe kokoa. Na dia azo ampiharina amin'ny faritra maro amin'ny orinasanao aza ny fisainana fitomboana (fampitomboana ny fahatsiarovan-tena, fitazomana, sns.), Ho an'ny tanjak'ity lahatsoratra ity dia ny fitomboan'ny fahazoana mpanjifa fotsiny no tiako horesahina.
Ny ekipan'ny fitomboana niforona tamin'ny fiandohan'ny taona dia nandalo fitsapana sy hadisoana betsaka, niaina fandresena lehibe ary tsy fahombiazana tsy azo ihodivirana. Na efa manana tetik'asa marketing amin'ny fitomboana vitsivitsy ianao, na tsy manana ny fomba hanombohana ny fizotrany, ireto misy zavatra vitsivitsy nianaràn'ny ekipanay tamin'ny taona lasa momba ny fananganana milina fitomboana mahomby hanamarinana ireo fantsom-pandraisana mpanjifa tsy voadinika .
Angony ny hevitra fitomboana avy amin'ny REHETRA.
Manome fomba fijery tsy manam-paharoa ny sampan-draharaha samihafa manoloana ny toerana misy ny fahafaha-manao. Ny torohevitro: ahy ny fahaizan'izy ireo. Ny mpikambana iray ao amin'ny ekipa injeniera sy ny mpikambana ao amin'ny ekipan'ny Operations dia hanome hevitra samy hafa be. Araraoty izany.
Tsy ny fandraisana mpikambana isan-karazany ao amin'ny ekipa ihany no manome anao teboka tsara hanombohana, fa manome anao fotoana hitrandrahana ny toe-tsaina fitomboana sy fanandramana ho ADN an'ny orinasa misy anao. Na dia manana ny 'tondrozotra fitomboana' aza ny ekipan'ny fitomboanao, na ny hetsika fitomboana kasainao hampiharina ao anatin'ny fe-potoana iray nomena, ny olona rehetra ao amin'ny fikambanana dia tokony hahatsapa ho manana ny fizotrany.
Alao antoka fa manan-jo ianao Analytics ary fotodrafitrasa angon-drakitra napetraka.
Aza manidina jamba. Rehefa manomboka ny fandraisana andraikitra amin'ny fitomboana dia tsy maintsy manana famaritana mazava ianao momba ny fahombiazan'ny fahombiazana sy ny fomba hanarahanao azy. Ny fananana ny fitaovana ilaina mba handrefesana tsara ny tanjonao dia zava-dehibe. Ny dingana ampiasainao hamaritana ny fahombiazana dia tokony hatsaho amin'ny sehatry ny drafitra ary taterina amin'ny tarika mahazatra. Ny tadivavarana matanjaka dia ny ainao. Amin'izay ianao vao afaka mianatra avy amin'ny valin'ny fitsapana ary manangana hetsika lehibe kokoa sy tsara kokoa amin'ny ho avy. Toy ny amin'ny fandraisana andraikitra mahomby, Analytics avelao ihany koa ny ekipanao hitsimpona fahitana sy fianarana vaovao amin'ny andrana tsy mahomby ihany koa.
Ataovy lohalaharana ireo hevitra momba ny fitomboana mba hifantoka amin'ny fanomezana lanja farany ambony.
Misy fantsom-pividianana mpanjifa an'arivony maro ho anao, tsy lazaina intsony ny fahafaha-mitrandraka vaovao isan'andro. Amin'ny maha mpivarotra fitomboana anao dia mila mamantatra ny fomba ianao ianao afaka manome ny tombam-bidiny indrindra amin'ny orinasanao amin'ny alàlan'ireo fotoana mety ireo. Raha fintinina dia ilaina ny mianatra milahatra sy manome laharam-pahamehana ny hevitra.
Syndrome mamiratra dia mety ho fandrika mahazatra ho an'ny mpivarotra fitomboana ary manararaotra fotoana vaovao. Aza milatsaka amin'izany. Raiso kosa ny rafitra hampihenana ny tabataba ary ampidiro fomba fiasa miverimberina sy azo ovaina. Misy fomba maromaro naroso momba ny fizotran'ny asa fitomboana, noho izany dia alao antoka fa mandany fotoana ny ekipanao mba hahitana ilay tena mety aminao sy ny tontolo iainanao.
Mampandanjalanja ny risika amin'ny valisoa.
Na dia ataontsika loha laharana aza ny fanamafisana ny isan'ny 'amin'ny ramanavy' raisinay (volume, volume, volume!), Dia takatsika ihany koa fa tsy ny fotoana rehetra dia noforonina mitovy. Ny filokana lehibe iray, ny fahazoana misintona dia afaka mandresy fandresena kely folo kely kokoa.
Nahita fahombiazana izahay tamin'ny fampifangaroana ireo loza mety hitranga miaraka amin'ireo filokana kely tsy dia atahorana. Ny famaritana ny "fifandanjana" dia ho an'ny ekipanao ihany, fa aza manalavitra ny fiovana amin'ny haben'ny risika azonao amin'ny taktika tsirairay. Ny tetika sasany dia manolo-tena tsara amin'ny fandehanana, amin'ny diany, amin'ny fihazakazahana, fa ny hafa kosa mety mitaky fomba bebe kokoa amin'ny fomba rehetra.
Fahadisoana eo amin'ny lafiny hazakazaka haingana loatra.
Ny fotoana dia zava-bita lehibe indrindra, na eo aza ny fananana matetika indrindra an'ny ekipanao. Aza matahotra ny mihetsika haingana. Ohatra, misy fanandramana fitomboana a mpivezivezy voalohany tombony, midika izany fa ny fahafaha-manao dia mety manohana ireo izay manolo-tena amin'ny tetika alohan'ny hametrahana azy. Zava-dehibe ny manolo-tena aloha amin'ny tranga toy izany, satria io no mety maha samy hafa ny ROI goavambe na ny fiverenana tsy misy dikany.
Mijanona ao amin'ny marikao sy ny iraka ataonao.
Ity tendrony ity dia mety toa somary klise ihany, saingy fitsipika tsara ihany izany. Rehefa manandrana fantsom-pitomboana ianao dia manontania tena hoe: "Raha miverina tsara io tetika io, hampiharintsika amin'ny tetikadintsika maharitra ve izany? ' Raha tsia ny valiny dia mandroso. Tetika fitomboana maro no afaka manararaotra anao handresy haingana nefa zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fanaovana sorona ny UX na ny fahatsapana ny marika dia, sarany miafina. Ny zavatra sasany dia mijery tsara amin'ny taratasy fa raha mifanohitra amin'ny voan'ilay hoe marika ianao dia tsy mendrika ny fotoana, fampiasam-bola na ezaka izany.
Mangarahara amin'ny valiny sy ny fianarana.
Na manao ahoana na manao ahoana ny valin'ny fitsapana manjombona, ataovy izay hametrahanao ny demokrasia amin'ny ekipanao mba hahafahan'izy ireo mianatra aminao. Tsy misy antony tokony hanaovana fahadisoana mitovy amin'ny olona marobe satria ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia misalasala ny hampifanaraka ny zavatra ianarany. Tombontsoa ho an'ny rehetra amin'ny ho avy.
Na inona na inona famakianao sy fikarohanao hetsika fitomboana, ny fomba haingana indrindra hianarana dia ny manomboka mandinika ny hevitrao. Aza mandringa amin'ny fisalasalana na amin'ny tahotra sao tsy hahomby. Tsy hahomby ianao. Ekeo izany. Mianara avy amin'izany. Ary avy eo ataovy indray. Io ihany no fomba fitomboana.
Tags: fitomboanapaikady fitomboanafitomboan'ny marketingmpamakyzavatra mamirapiratrasoso-kevitra
Jon Corwin dia talen'ny Marketing Growth ao amin'ny Readers.com. Amin'ny maha mpitarika fitomboana azy dia misy ny fikarohana sy fanandramana fantsona vaovao, fampandrosoana ny fividianana mpanjifa ary fiaraha-miasa stratejika. Ny votoatin'ny ekipa Growth dia ny mamantatra haingana, manamarina, mamerina, ary avy eo mandanjalanja fantsona vaovao hanampiana hanafainganana ny fitomboan'ny vola miditra Readers.com. Izy dia liana amin'ny fananganana fehintseranana momba ny varotra azo tsapaina mba hitarika ny valim-panombohana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny ambaratonga.
Vision6: Vahaolana mora azo, azo ovaina, vahaolana amin'ny marketing ho an'ny orinasa